विदेशी लगानी स्वीकृति भैसकेपछि पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने ! « GDP Nepal
विदेशी लगानी स्वीकृति भैसकेपछि पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने !
काठमाडौं । वैदेशिक लगानी स्वीकृति भइसकेपछि लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने व्यवस्था हटाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले नै विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै यस्तो व्यवस्था हटाइ जानकारी दिएमात्र पुग्ने सुविधा दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा यहाँ स्थापना हुने उद्योग तथा कम्पनीको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नेपाल पठाउन÷भित्र्याउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।